ပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြသွားခဲ့တဲ့ မန်ယူနောက်ခံလူ အန်တိုနီယိုဗလန်စီယာ | Football Myanmar
ပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြသွားခဲ့တဲ့ မန်ယူနောက်ခံလူ အန်တိုနီယိုဗလန်စီယာ
November 18, 2018 Adam Willian	11 Comments
အသက် (၃၃) နှစ်အရွယ် မန်ယူနောက်ခံလူ ဗလန်စီယာရဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းဟာ လက်ရှိဘောလုံးရာသီအပြီးမှာကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီး မန်ယူအနေနဲ့ စာချုပ်သစ်ထပ်မံကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိတော့ပါက အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ အိုးထရက်ဖို့ဒ်ကနေ ထွက်ခွာသွားနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်။ Metro ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ အဆိုပါ အီကွေဒေါသားအနေနဲ့ မန်ယူကနေထွက်ခွာခဲ့ရင်တောင်အင်္ဂလန်မှာပဲ ဆက်လက်ကစားလိုနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဗလန်စီယာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီနှစ်ခုမှာတော့ မော်ရင်ဟိုရဲ့ကစားကွက်မှာ ညာနောက်ခံလူနေရာကနေ ပုံမှန်အသုံးတော် ခံခဲ့ပြီး လက်ရှိဘောလုံးရာသီမှာတော့ အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်နေ့ကနေ စတင်ပြီး ပွဲထွက်ခွင့်မရရှိတော့ပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
မော်ရင်ဟို အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဟာ ကြံ့ခိုင်မှုပြဿနာရှိနေတယ်လို့ ဆိုထားပေမယ့်လည်း ဗလန်စီယာကတော့ယခုတစ်ပတ်ထဲမှာ သူပွဲထွက်ခွင့်မရတာဟာ ဒဏ်ရာကြောင့်မဟုတ်ပဲ မော်ရင်ဟိုနဲ့သာ သက်ဆိုင်တယ်လို့ ရှင်းပြထားပါတယ်။”မော်ရင်ဟိုနဲ့ ဆက်ဆံရေးကတော့ အမြဲတမ်းအဆင်ပြေပြေရှိနေပါတယ်၊ အခုလောလောဆယ်မှာ ကျွန်တော်ကစားခွင့်မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်အချို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်၊ အခုကျွန်တော့်နေရာမှာ ကစားနေတဲ့ အက်ရ်ှလေယန်းဟာ ကောင်းကောင်းကစားနေပါတယ်၊ (နည်းပြရဲ့) ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ လေးစားသွားရမှာပါ”
“အခု ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တာက လေ့ကျင့်နေဖို့နဲ့ မော်ရင်ဟို ကျွန်တော့်ကို လိုအပ်တဲ့အခါ အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့ပါပဲ၊ ပြီးတော့ ကစားခွင့်ရရှိအောင် သင့်တော်တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေရမှာပါ၊ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခုချိန်မှာ အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေပါတယ်၊ နောက်ထပ်ကစားခွင့်ရဖို့ အခွင့်အရေးကောင်းတွေ ရရှိလာမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဗလန်စီယာရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ လာမယ့်အပတ်မှာတော့ ကစားသမားရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အသင်းရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ကာရင်တန်မှာ စကားပြောဆိုဖို့ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ လာမယ့်ဇန်နဝါရီအပြောင်း အရွှေ့ထဲမှာလည်း ဗလန်စီယာကို ရောင်းချသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်သွားနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Previous Postချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ်လူ ၂ ဦး ရဲ့ ခြေစွမ်းပိုင်း ကို သုံးသပ် သွားခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ် ကစားသမား ဟောင်း ရေးပါလာNext Postနည်းပြ အမ်မရီ အာဆင်နယ် အသင်းကို ဘယ်လို ပြောင်းလဲမှု တွေ ပြုလုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ဖွင့်ဟ ပြောကြား သွားခဲ့တဲ့ #ယွန်းဘတ်
11 thoughts on “ပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြသွားခဲ့တဲ့ မန်ယူနောက်ခံလူ အန်တိုနီယိုဗလန်စီယာ”
Es ist eein bemerkenswerte Schriftstück Unterstützung der alle online Besucher; sie nehmen erhalten Nutzen vvon ihm bin ich mir sicher.
✅ DATING SITES FREE ☏ http://sexinyourcity.ml ☜
I amavery attentive lover who is great at bedroom and adventures with no desire for mind or full of themselves attitudes.
edwardhpnk.x.fc2.com The neighborhood session was supposed to update residents about the project’s status.
If you desire to increase your knowledge just keep visiting this site and be updated with the hottest gossip posted here.
You’re so interesting! I don’t think I’ve truly read something like that before. So great to find someone with some genuine thoughts on this subject matter. Really.. thank you for starting this up. This website is one thing that’s needed on the web, someone withabit of originality!